Kedu ihe bụ nematodes na otu esi emeso ha - Ogwu - 2020
Nematode umu na nkọwa
Leafy (strawberry) nematode
Nkpọrọgwụ (gallic) nematode
Ihe dị ize ndụ na otu esi achọpụta nematode n'ogige
Kedu otu esi alụ ọgụ na nematode
Esi kpochapụ ihe ndị na-adịghị mma: mgbochi
Kedu ihe nematode yiri
Nke mbụ, tụlee onye nematodes dị na ihe nematode yiri. Na mkpokọta, e nwere ihe dịka iri atọ ụdị pests ndị a. Ụfọdụ n'ime ha bụ ndị na-eto eto na osisi, ndị ọzọ na-emetụta akụkụ nke anụmanụ, e nwere ndị dị ize ndụ nye ụmụ mmadụ. N'isiokwu a, anyị ga-elekwasị anya na osisi parasaiti nematodes. Ha na-eri nri na osisi, na-emecha mee ka ọrụ ha dị mkpa ma nwụọ.
Ndị a bụ obere ikpuru na-adị na nha 1 ruo 2 mm. Ụmụ nwoke dị ogologo karịa oge nwanyị. Ụdị ahụ nwere ike gbanwee, oval, filiform. Na njedebe nke torso ubé narrowed. A na-akpọ pests ndị a na-akpọ roundworms, n'ihi na n'ofe akụkụ ọdịdị ahụ ha yiri gburugburu. Nematodes dị ọcha ma ọ bụ agba aja aja. Akụkụ nke ọdịdị nke nematodes bụ akpazụzụ muscular-dermal. A na-ekpuchi ahụ ya na nnukwu osisi na-agbanwe agbanwe, nke nwere ike ịgbanye ma ọ bụ dị mma, kpuchie ya na epithelium si n'elu. N'okpuru akpụkpọ ahụ bụ akwara ogologo oge. Nri nwere obere isi na egbugbere ọnụ na-ekwu okwu. E nwere nkume dị na ya, nke na-arụ ọrụ dịka akụkụ nke aka, na obere anya.
Nematode nsen bụ gburugburu ma ọ bụ oval. Agba dị ọcha. Larvae na-etolite nime ha, na-acha ọcha na akụkụ azụ nke azụ ahụ.
Ị ma? Nematodes nwere akụkụ ahụ nke ọma, nke kachasị mma. Tụkwasị na nke ahụ, ha na-elebara anyanwụ anya ma na-anwa idebe isi ha na nduzi ya. Ụbọchị ndị gbara ọchịchịrị kacha mma maka mmeputakwa nke nematodes.
E nwere ụdị atọ nke osisi nematodes:
Ha na-emetụta ọ bụghị nanị ubi, ubi, kamakwa osisi ime ụlọ. Ụkpụrụ ndụ ha nwere otu - ha na-eri nri na osisi. Otú ọ dị, ọdịdị ahụ, ogo, ebe obibi dịtụ iche.
Nematode na-acha akwụkwọ nwere ọdịdị ọdịdị filamentous. N'ikpeazụ, ikpuru nematode ruru 1 mm. Nwee agba aja aja. Ha dị na akwụkwọ nke ha na-abanye site na mmebi nke efere akwukwo ma ọ bụ site na pores na akụkụ ala ha.
Ihe ịrịba ama nke mmebi osisi site na nje ahụ bụ:
ọdịdị nke tụrụ aja aja na epupụta nke ọdịdị oge;
na-agba ọsọ, na-ada mbà, hapụ ụcha ha;
eto eto na-ada ngwa ngwa;
Mgbado aja na-emetụta buds;
mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ;
a na-ebelata mkpụrụ nke ọma:
a na-etolite eriri na-egbuke egbuke na akụkụ ala nke epupụta, nke na-emesị nweta ụcha acha uhie uhie.
N'ime oge, osisi emetụta pests ma na-ere. Nematodes kwadoro oyi n'oge akọrọ. Anwụrụ na-agafe site na ala ruru ala, ata, site na ihe ọkụkụ ndị dị nso.
Ọ dị mkpa! Mkpụrụ ndụ na-anwụ anwụ mgbe a na-ekpughere ala. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ha na-ada na epupụta ịda ada, nọgide na-atụgharị, na-amị, ma na-agafe na osisi ndị ọzọ. Ya mere, maka mgbochi na ịchịkwa, ọ dị mkpa iji iwepụ faịlụ ndị dara ada na saịtị.
Ndị kachasị na-arịa nje bụ osisi ndị dị ka:
Ngwurugwu nematodes nwere ụdị filamentary nke ahụ, na-eru n'ogo 1 mm. Parasitic na ịkụ, buds, okooko osisi. Onye na-ata ahụhụ na-abanye n'ime mkpuru osisi. A na-egosiputa mmebi nke ọdịbendị na stemworms site na mgbaàmà ndị a:
Ome mgbochi na-eto eto;
ọ ga-eme ka ha ghara ịdị ọcha;
buds na-acha ure, na-akpọnwụ;
ka oge na-aga, osisi ahụ kụrụ ma nwụọ.
N'agbanyeghị eziokwu na pests na-achọ mmiri, na-esi na ikpuru nwere ike ịnọgide na-arụ ọrụ ha dị mkpa, ọbụna na-anọ ruo ogologo oge na akwukwo oyi na akpịrịkpa nke osisi. Gbasaa na afụ ọnụ na-egbu egbu, bulbs, tubers, cuttings, ọtụtụ obere mgbe site na osisi ma ọ bụ ala merụrụ.
Osisi ndị dị ka pasili, yabasị, galik, tomato, radishes, na cucumbers bụ ndị kacha nwee ike ibute nje ndị a.
Ị ma? Oge ndụ nke ikpuru nwere ike iru ruo afọ 2.
Na nematode mgbọrọgwụ bụ nke kasị buru ibu ma ruo ogologo 2 mm. Site na ụdị ndị dị na mbụ dị iche na nke ahụ na-emetụta usoro osisi ụjọ. Ọ na-eme ka osisi dị iche iche na-adị na ya, na-ekpuchi ha - na-egbuke egbuke.
Osisi ndị na-emetụta ala nematode ji nwayọọ nwayọọ kwụsị, belata, ma kwụsị ịmalite. Akwukwo curling. Mgbọrọgwụ ndị dị n'okpuru Gauls, anaghịzi abawanye ma nwụọ. N'otu oge ahụ, mgbọrọgwụ ajị agba (mgbọrọgwụ dịka ntụgharị) na-amalite ịba ụba n'ụba. Mgbọrọgwụ ndị a adịghị eme ka uto nke ọdịbendị na-eme, kama ọ bụ naanị wepụ ihe ndị na-edozi ha.
Ọ dị mkpa! Ọ dị mkpa ịmata ọdịiche dị n'agbata nematode galls na okpukpu osisi na mgbọrọgwụ nke ụfọdụ osisi, nke mmiri na-echekwa. Ndị nke ikpeazụ ahụ nwere agba ọcha, ebe ụgba ndị ahụ bụ odo ma ọ bụ aja aja.
Gall nematodes na-agbasa site na ala ruru ala, mgbọrọgwụ nke mgbọrọgwụ, osisi, bulbs, ngwaọrụ, site na osisi dị nso. Chrysanthemums, osisi roba, dracaena, begonias, lilies, aloe bụ ndị kachasị emetụta ha.
Nematodes bụ pests dị ize ndụ, ha na-amụba ngwa ngwa na osisi ma mee ka ha nwụọ. Nri, na-abanye n'ime anụ ahụ, na-eri ihe ọṅụṅụ ha ma were ihe oriri niile. Na mgbakwunye, na usoro nke ọrụ dị mkpa, nematodes na-ezochi ihe ndị na-egbu egbu nke na-eme ka a ghara ịkụ mkpụrụ ma na-eduga na oke ogbugbo ha na petioles. Osisi ndị na-adịghị mma na-eme ka ha ghara ịdị na-acha, na-agwụ ike ma na-agwụ ike, deform, na mkpụrụ ha na-ebelata.
Ọ na-esi ike ịchọpụta ihe ndị na-adịghị mma n'ihi na ha dị obere. A pụghị ịhụ naanị mkpụrụ osisi na nchịkọta anụ ahụ site n'inyocha epupụta, buds na ị ga-esi na iko nke na-eto eto. A pụrụ ịchọta nje ndị ọzọ site n'ịkụ ala. Ha anaghị eme ka akpụkpọ aja na-acha na mgbọrọgwụ. Tụkwasị na nke ahụ, mgbe a na-ewepu osisi ahụ site na ala, obere ájá ụrọ ga-ada site na mgbọrọgwụ. Ọ bụrụ na i were ihe dị otú ahụ ma wụsa ya na mmiri ọkụ, ikpuru ga-apụ.
Ọ dị mkpa! Nematodes nwere ike ime ka mkpasu iwe na ihe nfụkasị na akpụkpọ ahụ, ya mere eji arụ ọrụ rụọ ọrụ na osisi ahụ.
Nematodes siri ike ịlụ ọgụ. Ọ bụrụ na osisi ahụ na-emetụ ya n'ahụ, ọ ka mma ịhapụ ya ka ndị pests ghara ịkwaga n'ọdịbendị ọzọ. A pụrụ ịchịkwa nri ntanetị site na ụzọ ndị a:
Ụzọ kachasị dị irè iji merie nematodes bụ ọgwụ ọjọọ dịka:
A na-eji osisi na-emepụta osisi, nke a ghaghị ime na ụtụtụ (site na oge awa 8 ruo 11) ma ọ bụ na mgbede (mgbe awa 17 gasịrị). Maka mmetuta kachasị mma, họrọ otu ụbọchị na-adịghị agwụ agwụ. A machibidoro ụdị ihe ndị ahụ dị n'ime ụlọ. Mgbe ị na-alụ ọgụ na mgbọrọgwụ mgbati, a wụsara ihe ngwọta n'elu ala. Ihe na-eme na-eme naanị ndị okenye, n'ihi ya, a ghaghị imezi ọgwụgwọ ọtụtụ ugboro.
Ndị mmadụ na-eme ihe na-adịghị mma n'ihi na ha adịghị egbu egbu maka osisi na ụmụ mmadụ, emela ka nsogbu dịrị. Ihe ha na-arụ ọrụ bụ ihe ndị e kere eke. Otu n'ime ihe ndị dị irè dị na Nematophagin. A ghaghị ịmegharị ihe nile ọ bụla, na-agbaso ntuziaka, ka ha wee ghara imerụ osisi ahụ ma ghara ịkụ ha ọkụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ụzọ ndị ọzọ ị ga-esi kpochapụ ya na ala, ị kwesịrị ịnwale ọgwụgwọ okpomọkụ nke usoro mgbọrọgwụ. Iji mee nke a, a ghaghị iwepu osisi ahụ n'ala. Mgbọrọgwụ, nke kpụrụ Gauls, nwere ike bechapụ nke ọma. Otú ọ dị, ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ mgbọrọgwụ ndị ahụ, naanị ndị kachasị emebi ga-ewepụ. Ọ bụrụ na ị wepụ ọtụtụ mgbọrọgwụ, osisi ahụ agaghị adị ndụ. Mgbe ahụ, a ghaghị ịdọrọ ala ahụ maka minit ise n'ime mmiri ahụ na okpomọkụ nke ogo ogo. Ọ bụrụ na okpomọkụ dị na 45 ruo 50 ogo - oge "ịsa ahụ" kwesịrị ịgbatị ruo minit 10-15.
Mgbe a ghaghị ịkụnye ọgwụgwọ mmiri n'ala ọhụrụ. N'otu oge ahụ, a na-atụ aro ka ị gbakwunye obere ọgwụ mgbochi mgbochi na ala. Ala kwesịrị ịdị ọcha, nke mere na ikuku na-abanye ya nke ọma ma ọ bụghị mmiri na-asọ oyi. Maka nke a, ala nwere ike jikọta ya na ntakịrị ájá ma ọ bụ peat. Usoro ọgwụgwọ na-adabarakwa maka ịchịkwa akwukwo ahụ ma kpoo nematode. E wepụsịrị akwụkwọ ndị ahụ nje, a na-atụgharị osisi ahụ na mmiri ọkụ na transplanted n'ime mkpụrụ ọhụrụ.
Ị ma? Nematodes anaghị anabata okpomọkụ karịa ogo 40. Ogwu ndị ahụ na-eguzogide ọgwụ ma na-anwụ nanị na okpomọkụ nke 50-55 degrees.
Ebe ọ bụ na ị na-ekpochapụ nematodes siri ike, ọ ka mma idobe mgbochi. Ihe ndị a gụnyere ihe ndị a:
weputa oge site na ata;
nhichaa nke oma;
mgbe ụfọdụ ị na-apụ na-acha akwụkwọ edo edo na osisi;
mgbanwe oge nke ọdịbendị na ebe, mgbe ị na-ahụ iwu nke mgbanwe nke ọdịbendị;
ala mgbe nile;
enweghị mmiri mmiri;
na-egwu ala n'ala ọdịda;
Jiri naanị ihe ọkụkụ akụrụngwa.
Ụdị ihe ndị a ga-egbochi mwakpo nke pests ma chekwaa osisi gị.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na osisi ahụ nwere mmetụta siri ike ma wepụ ha, ị ghaghị ịgbachapụ ihe niile. Ma ọ bụghị ya, pests ga-agakwuru onye ọzọ.
Ugbu a, ị maara ihe na-adịghị mma, nke a ga-abara gị uru na nlekọta nke ubi, ubi na ụlọ n'ime ụlọ. Anụ ọkụ na-amụba ngwa ngwa, nke a ga-edugarịrị ọnwụ nke osisi. Ọ bụrụ na anaghị achọpụta ihe ndị na-adịghị mma na oge - a naghị echekwa osisi ahụ.